ईटा kiln: कैरेक्टराइजेशन, वर्णन, विशेष चिनाई र समीक्षा
तपाईं कम वृद्धि आवासीय भवन हीट आवश्यक छ भने, यो परंपरागत विशेष भट्टीमा प्रतिष्ठानहरु को प्रयोग छान्नुभएको छ।
प्रयोग गर्न आवश्यकता
माटोको इँटा, जो को छैन आगोको भट्टी निर्माण लागि उपयुक्त विशेषताहरु छैन उच्च तापमान withstanding सक्षम छ। यो निर्माण को लागि सबै भन्दा उपयुक्त सामाग्री अद्वितीय विशेषताहरु छ जो एक ईटा भट्टी छ। तिनीहरूलाई बीच उच्च तापमान गर्न प्रतिरोधी हो। यी उत्पादनहरू खुला आगो अलग कि झिल्ली सिर्जना र विनाश देखि संरचना जोगाउन प्रयोग गरिन्छ।
बालुवा-कागती ईटा को विशेषताहरु पनि छैन उपयुक्त छ। गर्मी प्रतिरोधी ईटा पनि भट्टियों औद्योगिक र घरेलू उद्देश्यका आन्तरिक सतहहरु अस्तर लागि प्रयोग गरिन्छ, एक विशेष उद्देश्य छ। यो भवन सामाग्री प्रकार र बारबेक्यू grills द्वारा स्थिर संरचना सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको छ।
तपाईं (विशेषताहरु हेर्नुहोस्। तल) प्रयोग गरिनेछ एक ईटा kiln छ भने, यो केही खास आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ भनेर याद गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरूमध्ये गुण को हानि बिना 1,000 डिग्री को गर्मी प्रतिरोध हो। निर्माण सुरक्षा प्रदान गर्दछ जो कम थर्मल चालकता, पनि महत्त्वपूर्ण छ। एक उत्पादन र गर्मी प्रतिरोध, ताप र ठंडा चक्र को एक ठूलो संख्या सामना गर्न इँटा सक्षम भेद गर्न सक्दैन। को वर्णन उत्पादनहरु ऊर्जा Accumulators छन्। अर्को शब्दमा बोल्ने, ईटा तेजी गरम छ र बाह्य वातावरणमा गर्मी बन्द दिन्छ।
दन्किरहेको इँटा, लेख मा प्रस्तुत गरिने को विशेषताहरु दुर्दम्य माटो, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज पाउडर र कोक पाउडर को ठूलो अंश हुन्छन्। यस्तो उत्पादनहरु ड्राई अहम प्रविधिले निर्मित छन् धेरै चरणमा को आज्ञा पनि समावेश छ। पहिलो कच्चा माल तयारी protrudes, जुन बेलामा चोट र kneaded माटो रूपमा। आरोप मिश्रण को परिचय पछि homogeneous राज्य ल्याइएको हो। यो प्रक्रिया चलिरहेको बेला, यो संरचना इच्छित चिस्यान स्तर हासिल गर्न पानी 10% मा थपिएको छ।
ईटा, जसको विशेषता अन्तिम मज्जा मा उत्कृष्ट एक कूदनेवाला मा राखिएको छ, र औषधि त्यहाँ जान्छ देखि। ईटा ढाला भएपछि, यो एक प्रेस मोल्ड मा तल्लो मुक्का खुवाउनुभयो छ। उत्तरार्द्ध माथिल्लो भाग कम र मुहर गर्न पर्याप्त हुनेछ जो उत्पादन, मा दबाव exerts छ। प्रक्रिया ब्लक प्लेटफर्म मा मोल्ड देखि धक्का पछि।
अहम प्रक्रिया फेरि दोहोर्याइएको छ, र उत्पादन 1000 डिग्री को एक तापमान मा स्थान लिन्छ कि गोलीबारी पठाइएको छ।
आगोको भट्टी हरेक मास्टर थाह हुनुपर्छ विशेषता जो ईटा, निर्मित हुन्छ, पूर्व-सुकाउने सफाया र उत्पादन समय कम छ। यो विधि प्लास्टिक मोल्डिंग तुलनामा सस्ता छ।
विशेषताहरु corpulent र घनत्व
माटोको इँटा जसको विनिर्देशों छैन आगोको भट्टी सिर्जना लागि धेरै उपयुक्त हो, सबै भन्दा राम्रो घर निर्माण गर्न बाँकी छन्। उत्पादनहरु को शारीरिक र रासायनिक गुण विनिर्माण विधि र कच्चा माल संरचना द्वारा निर्धारित छन्। भट्टियों निर्माण औद्योगिक वा घरेलू उद्देश्यका लागि र fireplaces प्रयोग ईटा। घनत्व लागि, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मापदण्डहरु को रूपमा खडा। प्रदर्शन डाटा प्रमाणीकरण GOST 24468-80 सेट रूपमा प्रक्रिया अनुसार गरिन्छ। मापन समयमा कुल porosity र स्पष्ट घनत्व निर्धारित। यी मापदण्डहरू बीच इष्टतम अनुपात प्रतिकूल अवस्था गर्न अधिकतम बल र प्रतिरोध हासिल गर्न सकिन्छ।
दन्किरहेको ईटा, निर्माण प्रविधि निर्धारण गरिन्छ विशेषता जो, एक उच्च तापमान, र खुला ज्वाला उजागर गरिएको छ। तन्यता बल उत्पादनहरु निरूपण र ब्रान्ड प्रविधि निर्भर। Fireclay ईटा उच्चतम तन्यता बल, ग्रेड sturdiness को छ - Shak, आंकडा व्यापक घरमा स्थापित अवस्थित Fireplaces लागि रूपमा प्रविधि र घरेलू भट्टामा बिछाउने, साथै लागि प्रयोग गरिन्छ 23 N / मिमी 2. यस्तो उत्पादनहरु बराबर छ भन्नुभयो। तपाईं एक ईटा kiln किन्न चाहनुहुन्छ भने, विशेषता बल महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।
तापमान सीमा को समीक्षा
विशेषज्ञहरूका अनुसार, भट्टियों र घरेलू Fireplaces सन्दर्भमा चिम्नी पाइप र च्यानल संग खुले आगोले सन्निहित फर्नेस, तिनीहरूले तापमान प्रभावशाली गर्न गरम छन् दहन उत्पादनहरु संग सम्पर्क हुँदा। भवन निर्माण को लागि प्रयोग सबै सामाग्री एक उच्च तापमान सीमा हुनुपर्छ। अधिकतम गर्मी प्रतिरोध छ जो उपभोक्ताहरु अक्सर चयन गरिएका छन् इँटा, आफ्नो तापमान सीमा 1630 1730 डिग्री को दायरा छ। कम कडे आवश्यकताहरु पूरा Fireplaces र stoves प्रयोग सामाग्री को अन्य घटक राख्नु गर्न। अनुभवी stovemakers भइरहेको 700 डिग्री को तापमान को सक्षम छ, जो flue सामाग्री प्रयोग गर्न सल्लाह।
थर्मल चालकता को समीक्षा
लेख मा प्रस्तुत गर्दै प्राविधिक विशेषताहरु जो फर्नेस इँटा, थर्मल चालकता को एक निश्चित स्तर हुनुपर्छ। यदि यो सम्भव भएसम्म कम छ, यो उच्च तापमान को प्रभाव बाट आसन्न निर्माण रक्षा गर्न सम्भव छ। यो एक fireclay ईटा हो भने, भने प्यारामिटर 1.8 भित्र भिन्न थियो - 1.9 डब्ल्यू / (एम * ° C)। मैग्नेसाइट ईटा 2.8 गर्न 2.6 को एक थर्मल चालकता प्रदर्शन। सक्रिय सिलिका ईटा सीमा मा 1.95 छ।
Hromomagnezitovye उत्पादनहरु भिन्न जो 1.75 2.85 गर्न डब्ल्यू / उच्चतम थर्मल चालकता, छ (एम * ° C)। प्रयोगकर्ता द्वारा उल्लेख रूपमा, माथि तथ्याङ्कले र कसरी पुष्टि गर्न, यो fireclay ईटा कम थर्मल चालकता छ छ। त्यसैले तिनले निर्माण मा व्यापक पाउनु भएको छ। यी उत्पादनहरु सुरक्षित उच्च तापमान को प्रभाव बाट संरचना रक्षा गर्न सक्षम छन्।
प्रतिकूल अवस्थामा प्रतिरोध को समीक्षा
पूर्ण-bodied ईटा kiln, उत्पादन खरिद आक्रामक मिडिया एउटा निश्चित प्रतिरोध हुनुपर्छ अघि जाँच्न जसको विशेषताहरु महत्त्वपूर्ण छन्। उत्तरार्द्ध दहन र आगोको उत्पादनहरु समावेश गर्नुहोस्। Alkalis र ईटा काम को सतह मा एसिड छैन, त्यसैले यो सूचक को आवश्यकताहरु तिनीहरूलाई प्रस्तुत छैन थियो। को संरचना दिइएको, यो कि टिप्पण लायक छ दुर्दम्य firebricks जहाँ सतह एक अम्लीय मध्यम संग सम्पर्क गर्न सकिन्छ ती डिजाइन मा प्रयोग गर्नुपर्छ। खरीदारों अनुसार, यो संरचना को पहिले विफलता हुन सक्छ।
पानी अवशोषण को समीक्षा
आगो प्रतिरोधी इँटा, माटो प्रयोग उत्पादित को गोलीबारी प्रक्रिया संरचना ढाकिएको pores मा। शून्य वातावरण बाट वा यो संग सम्पर्क मा पानी को उच्च पानी अवशोषण योगदान। उत्पादनहरु को विविधता आधारमा इँटा यसको स्कोप देखि तरल को 30% सम्म जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। यो सूचक एक बरु एक भवन सामाग्री को लागि प्रभावशाली सकिन्छ। उपभोक्ताहरु भने भण्डारण वा इँटा भण्डारण गर्न आवश्यक छ यस सम्पत्ति मानिन्छ पर्छ भनेर जोड। तपाईं लामो समय को लागि खुला भएको क्षेत्रमा उत्पादन उपस्थिति हटाउनु पर्छ भवन निर्माण सामाग्री बरफ वा वर्षा असर गर्न सक्छ भने यो विशेष गरी साँचो हो। यस्तो अवस्थामा, ईटा यसको बल र अन्य विशेषताहरु गुमाउने जोखिम।
चिनाई बल राखे गरिएको छ रूपमा इँटा गुणस्तर निर्भर हुनेछ, र समाधान सही तयार थियो कसरी। यो कुन उत्पादनहरु गीला आवश्यकता प्रविधि, पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। काम को पाठ्यक्रम प्रकार पत्थर को खम्बा को एक साधारण एरे उत्तेजित गर्दछ भने, चिनाई गुणस्तर फरक विश्वसनीयता हुनेछ। यो लगातार ठाडो seams नामेट एक पट्टी तिनीहरूलाई प्रदान गर्न आवश्यक छ, त्यसपछि मात्र तपाईं बल भरोसा गर्न सक्छन्। त्यसैले धुवाँ कोठा मा प्राप्त हुनेछ संरचना को पर्खालहरु, ग्याँस-तंग हुनुपर्छ।
तपाईं एक माटो समाधान, प्रत्येक उत्पादन संग पूर्व-moistened प्रयोग गर्नुपर्छ। को संरचना लागू हस्तान्तरण गर्न। बाहिर चिनाई पर्खालहरु प्रयोग TROWEL। समाधान ईटा को सतह मा ठाउँमा उत्पादन राख्दै, अंतराल बिना decomposed गर्न सकिन्छ। स्थापना पछि ब्लक अगाडि र पछाडि सार्न आवश्यक छ, संरचना अतिरिक्त छुटकारा गर्न आवश्यक हुनेछ। यी उत्पादनहरु स्थापना गर्दा नै सिद्धान्त कार्य गर्नुपर्छ। तपाईं पानी बाहिर इँटा हटाउन पछि, यो अलिकति पनि पछिल्लो पक्ष उठाने समाधान धारण गर्नुपर्छ। उत्पादन तुरुन्तै तेर्सो राखिएको छैन। यो बांधन मिसिन समाधान डायल अनुहार अनुमति र आफ्नो ठाउँमा प्रचार हुनेछ।
काम को nuances
सुविधाहरू निर्माण ईटा आवश्यक उत्पादनहरु soaking आवश्यक पर्दछ। एकाइ मात्र rinsed गर्न सकिन्छ, तर क्लच छिटो पूरा गर्न आवश्यक छ। धेरै भिगो ईटा चिस्यान छिटो समाधान अवशोषित हुनेछ dewatered र thickened छ।
तपाईं पर्याप्त कौशल छैन भने, त्यसपछि यो दृष्टिकोण तपाईं बाक्लो seams प्राप्त गर्न सक्छन्। यो ईटा को सतह मा समाधान फैलाउन गर्ने दोस्रो व्यक्ति को सहयोग खोज्न सिफारिस गरिएको छ।
ईटा जसको विशेषताहरु आगोको भट्टी फरक सामना, यो नै प्रविधी मा राखिएको छ। तर, यो एक पारंपरिक सिमेन्ट slurry प्रयोग गर्न सम्भव छ। भिजेको washcloth वा राम्रो उत्पादन कपडा खाट अर्को ब्लक मान्छ भएको भाग चिस्यान उजागर गरिएको छ। बांधन मिसिन समाधान मा अनुहार इँटा वा TROWEL लागू हुनुपर्छ।
तपाईं एक दुर्दम्य सामाग्री काम गर्न छ भने, त्यसपछि यो पानी संग एक सानो कुल्ला हुनुपर्छ। Seams विभिन्न तरिकामा गठन हुन सक्छ। को क्लच को पूरा प्लास्टर कवर मानिन्छ छ पछि seams vpustoshovku गरिनु पर्छ भने, यसरी तिनीहरूले 10 मिलिमिटरमा गहिराइमा गर्न समाधान भरिएको छैन। को seams मा प्रवाह र सतह राम्रो पालन गर्नेछ समाधान पलस्तर समयमा।
भान्सा लागि पनरोक laminate फर्श: समीक्षा, फोटो
सना काठ: विशेष गरी निर्माण
गणना, सुविधाहरू, संरचना र सिफारिसहरू: लागि ठोस को अन्धो क्षेत्र को अनुपात
तापमान आधारमा ठोस को बल सेट: तालिका
गर्मी प्रतिरोधी सीलेंट - अद्वितीय इन्सुलेशन हालतमा
भ्याट फिर्ताको भर्नु लागि opcodes। को भ्याट् मा सञ्चालन कोड 1011410 रिटर्न
सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला "अलौकिक": खोज जारी
को कुहिनो समर्थन संग Crutches (क्यानाडा)
ट्याबनेतृत्व बन्दोबस्त (क्रिमीआ): अवस्थाको, आवास, पर्यटन समीक्षा
गर्भाशय को कोलोपोस्कोपी - यो के हो? कहिलेकाहीं कोलस्पोपी र किन
तिनीहरूको हातले पर्खालमा रंगीन तितलीहरू
Herpes र कसरी यो व्यवहार के छ? herpes को रोकथाम
युद्ध गर्न Latecomer - यो जंगी जहाज "Yamato"